Cidha maanguddootaa – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Bitootessa 25, 2011(FBC)- Oduun biyya Chaayinaatii miliqee bahe tokko maanguddoonni waggaa 96 fi 85 sirna fuudhaa fi heerumaa waliin raawwatan jedha.
Bulchiinsa Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessatti torbee darbe maanguddoon waggaa 96 Haan jedhamuu fi maanguddoon waggaa 85 Wuu jedhamtu sirna fuudhaa fi heerumaa waliin raawwachuun isaanii kan ibsame.
Cidhni maanguddoota kunis jaalala warqee jedhamee dinqisifamaa jira.
Jaalaleewwan lameen yeroo jalqabaaf kan walbaranii fi jaalala waliin kan qabaman akka lakkoofsa Faranjootaa bara 2017tti ta’uu ragaaleen ni mul’isu.
Abbaan manaa Haan fi haadhi manaa Wuu jedhaman kunneen erga abbaa manaa fi haadha manaa isaanii duraan addaan bahanii osoo sirna fuudhaa fi heerumaa hin gaggeessiin qofaa isaanii ture jireenya isaanii gaggeessaa kan turan.
Akka carraa ta’ee ijoolleen Haanii fi Wuu hiriyoota yoo ta’an, ijoolleen kunneen ayyaana yeroo maatii qopheessanii yemmuu iddoo tokkotti walitti dhufan maanguddoota kanneeniif carraa wal baruu uumees jedhameera.
Duraayyuu maatiin isaanii qofaa jiraachuu kan isaan yaadesse ijoollee kanneen maanguddoota kanneen lameen walitti dhiyeessuu fi akka waliin jiraatan murteessuun misirootaa maanguddoota addunyaaf dhiyeessaniiru.
Haala kanaan kan wal baran maanguddoonni kunneen akka lakkoofsa Faranjootaa bara 2018tti sirna qubeelaa kan waliin raawwatan yoo ta’u, Kamisa darbe immoo sirna fuudhaa fi heerumaa isaanii waliin raawwataniiru.
Umuriin kan hin daageessine maanguddoota kanneen namoonni baay’ee sirna fuudhaa fi heeruma isaaniis “ Jaalala warqee” jedhanii ibsaniiru.